laacib » Ciyaartoyda Ka Baxay & Kuwa Ku Cusub Labada Kooxood, Safafka Macquulka Ah & Xaqiiqooyinka Ku Saabsan Kulanka Furitaanka Horyaalka Premier League.
Kulankaan xiiso gaar ah ayuu leeyahay Harry Maguire oo si weyn loola xiriirinayay Red Devils ayaana soo xaadiri doona Old Trafford si uu u wajaho laacibkii sida ba’an u dooneysay.
Markey timaado garoonka Old Trafford, laacibkii Foxes waxey lumiyeen 7-jeer, sideedii ugu dambeysay oo ay soo booqdeen kulamada horyaalka, 1-barbaro ayey heleen, waxeyna guud ahaan ku dhaliyeen waqtigaas 3-gool.
Manchester Unitd waa laacibkii ugu badan ee guulo gaaray kulamada furitaanka horyaalka Premier League taariikhda, 17-jeer ayeyna heleen guulo.
Juan Mata ayaa dhaliyay 4-gool, afartii kulan ee uu horyaalka ku wajahay Leicester City. Kaliya hal kulan ayuuna Old Trafford goolal uga dhaliyay. Dhanka kooxaha Norwich City ayuu ka dhaliyay 5, waana laacibkii kaliya ee ka baxan Foxes.